तपाईंको आज : २०७७ कार्तिक १९ बुधवारको राशिफल
सम्झनाको ह’त्या गर्ने पक्राउ, ह’त्यामा सासु पनि संलग्न
नेपाली जनताका अब दु:ख र कष्टका दिन गए : प्रधानमन्त्री ओली
तपाइको आज: २०७७ फागुन २० बिहिवारको राशिफल
सुन्दै नाचौँ-नाचौँ लाग्ने गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित्)
सामाजिक संजाल भरी कुशल, शान्तीश्री, ओवी र अञ्जलीको चर्चा (भिडियो सहित)
२०७७ कार्तिक १९, बुधबार
२०७७ कार्तिक १९ बुधवार, चतुर्थी – 04 Nov 2020
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – विना संघर्ष लक्ष्यमा पुग्न सकिने छैन । काममा विरोधीको बक्रदृष्टि पर्नेछ । अधुरा काम सम्पादन हुनेछन् । प्रतिश्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । स्वास्थ्य अनुकुल रहनेछ । पढाई लेखाईमा खासै प्रगति हुने छैन । पारिवारिक समस्या समाधान भएर जानेछन् । खेलाडीको लागि दिन बढि अनुकुल देखिन्छ ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – कामगर्ने सवालमा आलोचनाको शिकार हुदा मन खिन्न हुनेछ । व्यापारमा लगानी गरेपनि आम्दानी कम हुने हुनाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधी खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा आउने विवादले दैनिक काममा समस्या निम्तिनेछ । माया प्रेममा एक अर्का विच अविश्वास बढ्ने योग रहेकोछ ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – गरे जस्तो,सोचे जस्तो कहि कतै नहुन सक्छ । पारिवारिक खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट खासै लाभ लिन सकिने छैन । राज्यसँग सम्बन्धित काममा बढि समस्या आउने देखिन्छ । मनमा अशान्ति बढ्नेछ । भौतिक सुखमा कमि आउनेछ । अहार विहारका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । आफन्त सँग मनमुटाव बढ्नेछ ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – नोकरीमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउँदै अगाडी बढ्न सकिनेछ भने सत्रुता राख्नेहरु आफै साईड लाग्नेछन् । विवादित निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा आउने हुँदा घर परिवार तथा आफन्तहरु खुसी हुनेछन् । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी हुने योग रहेकोछ । पुराना स्वास्थ्य सम्वन्धि समस्याहरु हल भएर जानेछन् भने संकटबाट मुक्ति मिल्ने समय रहेकोछ ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – बाह्य कुरामा ध्यान नदिई काम गरेमा उपलब्धि हात लाग्नेछ । ऋण लगानीमा जोड नदिनु होला । अरुको भर नपर्नु होला आफुमा भएको उर्जाको प्रयोग गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । पहिलो प्रयास असफल हुनसक्छ । दोहो¥याएर गरेका काम सफल हुनेछन् । कृषि औजार तथा यान्त्रिक कामबाट बढि लाभ हुनेछ ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – सामाजिक पद पतिष्ठा प्राप्त भएपनि भनेको समयमा काम गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपर्नेछ । पढाइ लेखाइमा समय दिएपनि चाहेजस्तो सफलता प्राप्त नहुँदा मन खिन्न हुनेछ । आमा वा आमा सरहका मानिसबाट टाडिएर लामो दुरिको यात्रा हुने अत्याधिक सम्भावना रहेकोछ । कृषि तथा शहकारि व्यावसायलाई नयाँ तरिकाले बिस्तार गरी मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने अन्य व्यावसायमा मन्दी आउनेछ ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – समय प्रतिकुल देखिन्छ । मनमा अस्थिरता बढ्नेछ । नयाँ काममा हात नहाल्नु होला । आफन्तमा राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रा हुनसक्छ । कर्म क्षेत्रमा चाण्डालको आगमन हुनसक्छ सतर्क रहनुहोला । विना उपलब्धिको यात्रा हुनसक्छ । व्यापार घट्नेछ भने खर्चमा वृद्धि हुनेछ । घरका समस्याले मनलाई अशान्ति बनाउनेछ ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – बोलिको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलिकै भरमा कामहरु हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा तपार्ईँको निर्णयको उच्च कदर हुनेछ । आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरु तपार्ईँको कामदेखि खुसी हुनेछन् । पारिवारिक माहोलमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – समयले साथ दिनेछ । बाधा अवरोधहरु विस्तारै किनारा लाग्ने छन् । कामलाई निरन्तरता दिनु होला । सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । आर्थिक कारोवारमा सचेत रहनु होला । आन्तरिक कुरा कसैलाई नखोल्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ । सहयोग मिल्नेछ ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – स्वास्थ्य सम्वन्धी सामान्य समस्याले सताउन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्वन्धीत कारोबार फस्टाएर जानेछ भने विदेश यात्राको तय गर्न सकिनेछ । परिवार तथा आफन्तजन तपार्ईँदेखि टाडिनेछन् । राज्यबाट दण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ काम गर्दा सजक भएर गर्नुहोला । माया प्रेममा धोका हुनेछ । अनावश्यक ठाउँमा बल प्रयोग हुनुको साथै बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परेको भान हुनेछ ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – दिन प्रतिकुल बन्नेछ । अन्तिम चरणमा पुगेका काम रोकिन सम्भावना बढि देखिन्छ । परिश्रम खेर जान सक्छ । विश्वासमा धोका हुनसक्छ । काम गर्ने वातावरण विग्रेने छ । खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । कहि कतैबाट आस्था र विश्वासमा चोट पुग्न सक्छ । खर्चालु र कष्टपूर्ण यात्रा हुनसक्छ । व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा बढुवाको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानीगर्न सकिनेछ भने नया प्रकृतिको काम गर्ने बाताबरण बन्नेछ । पढाइ लखाईमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । आमा बुवाको सल्लाह तथा सुझाबलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्दा मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक कामहरु समयमा सम्पादन हुदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
घोचिएको पनि अनुुभव हुुँदो रहेनछ, खोप लगाउनुु पर्‍यो, स्वस्थ्य हुन पर्‍यो: माधवकुमार नेपाल
खोप लगाएको थाहा नै पाइनँ, कतिबेला खोप्नु हुन्छ होला भनेको त भइसक्यो पो भन्नुभो: प्रचण्ड
कोरोना विरुद्धको खोप विना हिचकिचाहट निर्धक्क भएर लगाउनुहोस्: सभामुख सापकोटा
सरकार र विप्लव समूह बीचको पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता सकियो
पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा फागुन २५ गतेदेखि शुरु
नारी दिवसका अवसरमा श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौडिने प्रतियोगिता हुने
तपाईंको आज : २०७७ फागुन १९ बुधवारको राशिफल
बलराम अधिकारी र सरिता अधिकारीको आवाज नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
खोप लगाएकामा फेरी देखियो कोरोना संक्रमण
१०५ वटा व्यापारीक फर्मलाई फर्मलाई ३० लाख जरिवाना
कैलाली ह’त्या प्रकरण : चार दिनसम्म खुलेन ह’त्याराको पहिचान
अमेरिका र क्यानडाको सीमा क्षेत्र थप ३० दिन बन्द गरिने
आफैँ खर्च व्यहोर्नेलाई होटल क्वारेन्टिन तथा नसक्नेलाई स्थानीय क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी
कोरोना सङ्क्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु
आजको मौसम: देशका विभिन्न स्थानमा भारी बर्षाको सम्भाबना सतर्क रहन आग्रह
कोरोनाको खोप पत्ता नलागेसम्म टोकियो ओलम्पिक गर्न नसकिने
निराको गीतमा शंकर र अन्जलीको रोमान्स हेर्नुहोस् भिडियो सहित
Copyright © 2021. All Rights Reserved. Powered by AMAZED